China-galoofyada la tuuri karo, Dharka ilaalinta la tuuri karo, Iibiyeyaasha maaskarada ee la tuuri karo - Baili Medical
Warshada gacan-gashigu waxay daboolaysaa dhul dhan 170000 mitir oo laba jibbaaran iyo bedka warshadda 50000 mitir oo laba jibbaaran. Caasimada ka diiwaan gashan shirkadu waa 100 milyan RMB.
Bixinta baxnaaninta iyo daaweynta jimicsiga,qalabka ilaalinta, gargaarka degdega ah, agabka caafimaadka, qalabka baxnaanintu, daryeelka daawaynta jidhka
100000 aqoon-is-weydaarsiga nadiifinta fasalka, qalab horumarsan iyo OEM samaynta mashiinnada baakadaha.
aqbal nashqadaada, waxay bedeli kartaa alaabta, cabbirka, calaamada, midabka. iwm sida looga baahan yahay.
1986 Bulid Aagga Warshadaha iyo Qalabka Ilaalinta, Bilawga iibka iyo soo saarista Qalabka caafimaadka iyo sahayda jimicsiga,Qalabka ilaalinta, Qalabka Gargaarka ugu horeeya,Alaabada caafimaadka ee la tuuri karo,qalabka baxnaaninta,daryeelka daawaynta jireed ilaa 2002,soosaarka iyo iibinta maaskaro wajiga iyo galoofyada caafimaadka ilaa 2020.
Warshada gacan-gashigu waxay daboolaysaa dhul dhan 170000 mitir oo laba jibbaaran iyo bedka warshadda 50000 mitir oo laba jibbaaran. Caasimada ka diiwaan gashan shirkadu waa 100 milyan RMB. Wajiga koowaad, iyada oo wadarta maalgashiga RMB 1.05, shirkaddu ay qorshaynayso in ay dhisto 200 nitrile iyo glove galves iyo 300 oo isku dhafan, synthetic iyo PVC galoofyada. Dufcaddii ugu horreysay, 39 khadadka wax-soo-saarka otomaatiga ah ee baaxadda weyn leh oo dhererkoodu yahay 180 mitir iyo 60 cusub oo isku dhafan, kuwa synthetic iyo PVC ayaa la dhisi doonaa. Waqtigaas, wax-soo-saarka sannadlaha ah ee dhammaan noocyada galoofyada waxay gaari doontaa in ka badan 45 bilyan. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 200 oo shaqaale xirfadlayaal ah iyo kuwa farsamada ah, in ka badan 2800 oo shaqaale ah, iyo qaddarka canshuurta sanadlaha ah ayaa ka badan 200 milyan yuan. Isla warshadaha, baaxadda wax soo saarka iyo suuqgeyntu waa tan ugu horreysa ee gobolka.
Maaddaama uu cudurku keenay wacyiga dadka ee ilaalinta badbaadada iyo isbeddelka caadooyinka nolosha, qaar ka mid ah warshadaha aan la aqoon ayaa si tartiib tartiib ah u galaya indhaha dadweynaha, gaar ahaan maalgashadayaasha. Warshadaha galoofyada ilaalinta ee la tuuri karo ayaa ka mid ah, mar suuq......
Gownnada go'doominta ee la tuuri karo, goonnada ilaalinta la tuuri karo, iyo gooyada qalliinka ee la tuuri karo waa dhammaan qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed ee sida caadiga ah loo isticmaalo isbitaallada. Laakiin habka kormeerka bukaan-socodka, waxaan inta badan aragnaa in shaqaalaha caafimaadku ......
Ma xidhatay maaskaro sax ah? Dad badan ayaa inta badan sameeya khaladaadkan!
Nolol maalmeedka, dad badan si sax ah uma xidhaan maaskaro! Haddaba sidee looga fujin karaa maaskarada si sax ah? Waa maxay khaladaadka aan la samayn marka la xidho maaskaro? Gaar ahaan, qof kastaa mar walba wuu la yaabay, sidee loo kaydiyaa maaskarada ka dib marka la saaro?